Man United Oo Old Trafford Ku Khaarajisay Swansea City, Alexis Sanchez Oo Abaartii Gool La’aanta Ka Baxay Iyo Lukaku Oo Shabaqa Soo Taabtay. – GOOL24.NET
Man United Oo Old Trafford Ku Khaarajisay Swansea City, Alexis Sanchez Oo Abaartii Gool La’aanta Ka Baxay Iyo Lukaku Oo Shabaqa Soo Taabtay.
March 31, 2018 Mahamoud Batalaale
Manchester United ayaa guul sahlan Old Trafford kaga gaadhay kooxda heerka labaad ka baxsanaysa ee Swansea City waxaana guushan Man United ku hogaamiyay Romelu Lukaku iyo Alexis Sanchez oo ka baxay abaartii gool la’aanta ahayd ee uu ku soo jiray todobadii kulan ee ugu danbeeyay ee uu Reds Red Devils u soo ciyaartay.
Manchester United ayaa shaqada ay guushan ku gaadhay sii qabsatay qaybtii hore ee kulankan iyada oo kooxda martida ahayd ee Swansea City aan siin wax furad ah oo ay Red Devils dhibaato ugu abuurto. Guusha ay Man United gaadhay ayaa si wayn sare ugu sii qaadaysa in ay xaqiijisato booska kaalinta labaad ee Premier League.
Daqiiqadii 5 aad ee bilawgii ciyaarta ayay ahayd markii ay Manchester United heshay goolka ay dhibaatada wayn ugu abuurtay Swansea City waxaana goolkan u saxiixay Romelu Lukaku kaas oo caawin ka helay Alexis Sanchez oo kulankan boodhka iska tumay waxayna ciyaaartu noqotay 1-0 ay ay Red Devils hogaanka ciyaarta kula wareegtay.
DAQIIQADII 20 AAD Alexis Sanchez ayaa dhaliyay goolkiisii labaad ee waayihiisa ciyaareed ee Manchester United isaga oo goolkan kaga baxay abaar xun oo dhinaca gool la’aanta ah oo uu ku soo jiray todobadii kulan ee tartamada oo dhan ugu danbeeyay ee uu Man United u soo ciyaaray wuxuuna ciyaarta ka dhigay 2-0 ay United ku heshay kalsoonida buuxda.
Intaas wixii ka danbeeyay Manchester United ayaa noqotay kooxda sida xoogan ugu dhegtay qaabkii ay ciyaarta ku maamuli lahayd ee ay saddexda dhibcood uga qaadan lahayd kooxda ay jugtii horeba ku hanaaday ee Swansea City.
Qaybtii hore ee ciyaarta ayaa lagu kala nastay 2-0 ay Man United guul ugu taagnayd isla markaana ay Swansea City xaaladu ugu xumayd, laakiin markii layskugu soo laabtay qaybtii labaad ee ciyaarta Man United ayaa wali raadinaysay qaabkii ay goolal kale kula iman lahayd.
Laakiin wax walba oo ay sameeyeen labada kooxood qaybtii danbe ee ciyaarta ayaan noqon mid wax goolal ah layska dhaliyay taas oo Man United ka caawisay in ay saddexda dhibcood kala baxday Old Trafford iyada oo talaabo wayn sare ugu qaaday in ay kaalinta labaad ee Premier League xaqiijisan karto.
Man United ayaa yeelatay 68 dhibcood waxayna laba dhibcood ka saraysaa Liverpool oo 66 dhibcood kaalinta saddexaad ugu jirta balse kooxda Klopp ayaa kulan dheeraad ah ciyaartay.